ထာ၀ရအသက် | Shwe Canaan TV
00Truth Friday, 29 July 2016
ထာ၀ရအသက်လမ်းကို သမ္မာကျမ်းစာက တိကျ စွာဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမအနေနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သောအပြစ်သား ဖြစ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြ...
ထာ၀ရအသက်လမ်းကို သမ္မာကျမ်းစာက တိကျ
စွာဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမအနေနှင့် ကျွနု်ပ်တို့
ဖြစ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုရမည်။ “အဘယ်
ကြောင့်နည်း ဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစ
ရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်
ကြပြီ။” (ရော၊၃း၂၃)။ ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော
အရာဟူသမျှသည် ဘုရားသခင်ကို ၀မ်းနည်းစေခဲ့
ထို့ကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သူ များဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးက ထာ၀ရဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ထာ၀ရ အပြစ်ဒဏ်ကို ခံထိုက်သောသူများဖြစ်သည်။ “အပြစ်တရား၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာ၀ရအသက်ပေတည်း။” (ရော၊ ၆း၂၃)
သို့သော် အပြစ်ကင်းမဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်(၁ပေ၊၂း၂၂)၊ ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ သားတော်(ယော၊၁း၁,၁၄) သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏ ပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုပေးဆပ်ရန် အသေခံခဲ့ပါသည်။ “ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူ သည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏” (ရော၊ ၅း၈)။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ (ယော၊ ၁၉း၃၁-၄၂)၊ ကျွနု်ပ်တို့ခံထိုက်သောအပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သူ ယူဆောင်သွားခဲ့သည် (၂ကော၊ ၅း၂၁)။ သုံးရက်မြောက် သောနေ့တွင် သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်၍(၁ကော၊၁၅း၁-၄) သူသည် အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်ခဲ့ ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ “သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကြီးစွာသော ဂရုဏာတော်နှင့်အညီ ငါတို့ကို တဖန်သွားစေတော်မူ၏။(၁ပေ၊၁း၃)။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်မှ `ရုန်းထွက်နိုင်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ခရစ်တော်ထံသို့ ပြန်လှည့်လာ၍ရပါသည်။ (တ၊၃း၁၉)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်၍ သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးအားလုံးပေးဆပ်ရန် အသေခံသည်ဟု ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိပြီး ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံရမည်ဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သော်သူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်၊ ထာ၀ရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင် အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” (ယော၊ ၃း၁၆)။
“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်သည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့် ၀န်ခံ၍ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ရော၊ ၁၀း၉)။ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသာလျှင် ကောင်းရာသုခဘုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော လမ်းသွယ်ဖြစ်သည်။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ် ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရအခွင့်မရှိ” (ဧ၊ ၂း၈၊၉)။
မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုလျှင် ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိပဲ ဤ ဆုတောင်းကိုရွတ်ဆိုခြင်းသည်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တခြားဆုတောင်းခြင်းကို မြွက်ဆိုခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်က အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်း ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြသော ဆုတောင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသော ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်၊ ကျွနု်ပ်သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှား၍ သေခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်ကြောင်းကို ကျွနု်ပ်သိရှိပါ၏။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ကြွေးအားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပါ၏်။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရခဲ့ပါ၏။ ကျွနု်ပ်သည် အပြစ် ဒုစရိုက်ကို ကျော်ခိုင်းပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ အံ့သြဖွယ်ရာ ကျေးဇူးတော်နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဖြစ်သော ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးအတွက် ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏။! အာမင်!
Shwe Canaan TV: ထာ၀ရအသက်